သစ်ကုလားအုတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
Masai giraffe (G. c. tippelskirchi) at the Mikumi National Park, တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ
သစ်ကုလားအုတ်သည် အာဖရိကတွင် ပေါက်ဖွားသော နို့တိုက်သတ္တဝါ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကုန်းနေသတ္တဝါများတွင် အရပ်အရှည်ဆုံး ဖြစ်ပြီး စားမြှုံ့ပြန်တတ်သော သတ္တဝါများတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနည်းအားဖြင့် camelopard ဟုခေါ်ပြီး camel မှာ ကုလားအုပ်နှင့် မျက်နှာခြင်း ဆင်သောကြောင့် ဖြစ်ပြီး lopard မှာ ကျားသစ်ကဲ့သို့သော အကွက်များ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသော သစ်ကုလားအုတ် အထီး တစ်ကောင်၏ ပျမ်းမျှ အရွယ်အစားမှာ ၁,၂၀၀ ကီလိုဂရမ် (၂၆၀၀ ပေါင်) ခန့် ရှိပြီး သစ်ကုလားအုတ် အမ တစ်ကောင်၏ ပျမ်းမျှ အရွယ်အစားမှာ ၈၃၀ ကီလိုဂရမ် (၁၈၀၀ ပေါင်) ခန့်မျှ ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၄ ပေမှ ၁၇ ပေ အထိ အမြင့် ရှိသည်။ အရပ်အရှည်ဆုံး သစ်ကုလားအုတ်မှာ ပေ၂၀ ကျော်ခန့်မျှ မြင့်သည်ဟု မှတ်တမ်း ရှိသည်။
သစ်ကုလားအုတ်၏ မူလနေထိုင်ရာဒေသမှာ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှသည် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအထိ ကျယ်ပြန့်သော အာဖရိကတိုက် တစ်တိုက်လုံးဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ၌မူ ဆဟားယားသဲကန္တာရနှင့် ဇမ်ဗီဇီမြစ်အကြားရှိ အာဖရိကတိုက်အရှေ့ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်း လွင်ပြင်များ၌သာ တွေ့ရ တော့သည်။ သစ်ကုလားအုတ်သည် မြက်ပင်များ အလွန်ရှားပါးသော အဆိုပါခြောက်သွေ့သော ဒေသများ ၌ ပေါက်ဖွားသဖြင့် ယင်းတို့၏အစာမှာ သစ်ရွက်များသာ ဖြစ်ချေသည်။ သို့သော် ထိုဒေသများတွင် ပေါက်ရောက်သော သစ်ပင်များ၏ အကိုင်းများမှာ မြေကြီးမှ အလွန်မြင့်သော နေရာများ၌သာ ရှိကြသည်။ ထိုအကိုင်းများမှ အညွန့်အတက်အရွက်များကို မှီအောင်စားနိုင်ရန် သစ်ကုလားအုတ်တွင် အဆမတန် ရှည်လျားသော လည်တံနှင့် ခြေထောက်များ ရှိရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ထိုအညွန့် အတက် အရွက်များကို မိမိရရ ကိုက်ဖဲ့နိုင်ရန်အတွက်လည်း အပေါ်နှုတ်ခမ်းမှာ ရှည်ထွက်လျက် ရှိပြီးလျှင် လျှာမှာလည်း တစ်တောင်ခန့် ရှည်လျားသည်။ ဤသည်တို့ကား သဘာဝ၏ ပြုပြင်မှုပင်တည်း။ သစ်ကုလားအုတ်၏ လည်တံမှာ အလွန်ရှည်လျားသော်လည်း လည်ချောင်းရိုးအဆက်မှာ အခြား တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ ခုနစ်ဆက်သာ ရှိသည်။ ပုံစံအားဖြင့် ရေမြင်းသည် အလွန်တုတ်ခိုင်သော သတ္တဝါ ဖြစ်၍ လည်ပင်းမှာ အလွန်တိုသော်လည်း အရိုးဆက် ခုနစ်ဆက်ပင် ရှိသည်။ ဤသို့ လည်တံရှည်သလောက် အရိုးဆက် မများသောကြောင့်လည်း သစ်ကုလားအုတ်သည် လည်တံကို ငန်းများကဲ့သို့ ပျော့ ပျော့ပျောင်းပျောင်း လှည့်ပတ်ချင်သလို မလှည့်ပတ်နိုင်ဘဲ တောင့်တောင့်ခိုင်ခိုင်နှင့်သာ ရှိနေလေသည်။ သစ်ကုလားအုတ်သည် ထနောင်းပင်မျိုး၊ နန်းလုံးကြိုင်ပင်မျိုးကဲ့သို့ ဆူးရှိသောအပင်များမှ အရွက်များ ကို လိုက်လံ စားသောက်လေ့ရှိ၏။ ထိုအရွက်များကို လှမ်းစားနေသည့် အခါမျိုး၌ ယင်း၏ လည်တံရှည်ကြီးသည် သစ်ကိုင်းကဲ့သို့၎င်း၊ အဝါနှင့် အညိုပြောက်များရှိသည့် ယင်း၏ကိုယ်လုံးမှာ သစ်ပင်အုပ်များပေါ်သို့ နေပြောက်ထိုးနေဘိသကဲ့သို့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ သစ်ပင်နှင့် ရုတ်တရက် ခွဲမရ အောင်ရှိနေသဖြင့် ရန်သူများ မြင်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းလေသည်။ ယင်းသို့ သစ်ရွက်များကို အေးအေးသာသာ လှမ်း၍စားနေစဉ် သစ်ကုလားအုတ်၏ ဦးခေါင်းသည် ရန်သူကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ရန် မျှော်စင်သဖွယ် ရှိနေလေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ရန်သူ၏အရိပ်အရောင်ကို ရိပ်ခနဲမြင်လိုက်လျှင် ဖြစ်စေ၊ ရန်သူ၏ အသံကို ချွတ်ခနဲ ကြားလိုက်လျှင်ဖြစ်စေ ခြေကုန်သုတ်၍ ပြေးတတ်လေသည်။ သစ်ကုလားအုတ် မျိုးစိတ်တစ်ခုတွင် အထီးရော အမတွင်ပါ ဦးချိုများရှိတတ်သော်လည်း များ သောအားဖြင့် အထီးများ၌သာ ဦးချိုများ ရှိကြသည်။ ဦးချိုဟု ဆိုရသော်လည်း ကျွဲ နွား ဦးချို တို့ကဲ့သို့ အလွန်မာကြော သည်မဟုတ်ဘဲ ချိုစောင်း၌ ဦးချိုကဲ့သို့ ချွန်ထွက်နေသည့် ဦးချိုယောင်ယောင် မျှသာဖြစ်၍ အရေပြားဖြင့်လည်း ဖုံးအုပ်လျက် ရှိပြီးလျှင် ထိပ်တွင် အမွှေးကြမ်းများအစုလိုက် ဖုံးလျက် ရှိသည်။ ထိုဦးချိုယောင်ယောင် နှစ်ခုကြားရှေ့တွင် လည်း အောက်ခံအရိုးသည် ကုန်းတန်းကလေးသဖွယ် အလယ်တွင် ခပ်ခုံးခုံး ရှိနေသောကြောင့် ယင်းကိုလည်း တတိယဦးချိုဟု ခေါ်လိုက ခေါ်နိုင်သေးသည်။ သစ်ကုလားအုတ်၏ ဦးခေါင်းနေပုံမှာ သမင် ဒရယ်တို့၏ ဦးခေါင်းပုံသဏ္ဌာန်ကဲ့သို့ ရှိပြီးလျှင် မျက်လုံးများမှာလည်းသမင် ဒရယ်မျက်လုံးများနှင့် များစွာတူလေသည်။ သစ်ကုလားအုတ်၏ ခြေလက်များတွင် ခွာများရှိ၍ အလယ်၌ နှစ်ခြမ်းကွဲလျက် ရှိသည်။ ထို့ပြင် နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ သမင်၊ ဒရယ် တို့ကဲ့သို့ စမြုံ့ပြန်တတ်သော တိရစ္ဆာန်မျိုးလည်း ဖြစ်သည်။ သစ်ကုလားအုတ်၏ သွားလာ ရွေ့ရှားမှုဟန်သည် ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ထားပုံကဲ့သို့ ထူးဆန်းပေသည်။ ယင်းသည် ဖြေးဖြေးသက်သာ ပြေး၍မရဘဲ လျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့် ကဆုန်ပေါက်၍ ပြေးတတ်သည်။ အကယ်၍ မပြေးဘဲ လမ်းလျှောက်သွားပါက လည်တိုင်ကိုမော့ကာ ဣန္ဒြေရရနှင့် ဖြေးဖြေးသက်သာ လျှောက်လေ့ရှိသည်။ သစ်ကုလားအုတ်၏အသားသည် အလွန်ကောင်း၍ လူများဈေးကြီးပေး ဝယ်ကြသည်။ အရေခွံကိုကား သားရေအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
↑ Muller, Z. (2016). "Giraffa camelopardalis". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T9194A136266699.en.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သစ်ကုလားအုတ်&oldid=719057" မှ ရယူရန်